पानीका पच्चीस कुरा
जन 10, 2018 | जानकारी
हामीले पंचमहाभूतको एउटा तत्वको रूपमा पानीलाई बुझ्दै आएका छौं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को संज्ञा नै पंचमहाभूत हो। प्रकृतिमा जे जति पद्धार्थहरू छन् ती सबै यी नै पाँच तत्वबाट बनेका छन्। मानव जिवन नै यी पाँच तत्वमा अडिएको छ। यी मध्ये कुनै नहुने हो भने मानव जिवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। हुन त पृ्थ्वीमा जमिन भन्दा पनि धेरै भूभाग पानीले ढाकेको छ तर पनि खान योग्य पानीको मात्रा निक्कै कम छ। हुन त नेपाल पानीमा विश्वकै दोश्रो धनी मुलुक मानिन्छ तर नेपालमा नै पानीको माध्यमबाट उत्पादन हुने बिजुलीको अभाव छ भने काठमाण्डौं लगायत देशका मुख्य शहरहरूमा खानेपानी कै अभाव छ। त्यसो त देशका कृषियोग्य भूभागमा सिंचाइ समेत पुग्न सकेको छैन।
पानी बिनाको संसारको कल्पना सायदै हुनसक्छ। हामी केही समय मात्र पानी नखाइ बस्ने हो भने प्याकप्याक पर्छौं। बच्चै देखी हामीले सुन्दै आएका छौं ‘पानी नै जिन्दगानी’। त्यसो त ‘थोपा सिंचाई’ पनि सुनिरहेको नै हो। अनि पहाडी क्षेत्रमा पानीको लागी पंधेरा सम्म पुग्न घण्टौं लाग्ने अवस्था आजपनि हट्न नसकेको हाम्रो वास्तविकता हो। पानी र पंधेरा अनि कलधाराका कुरा घुर्मैलो सम्झनामा रहेका शहरियाहरूका बीच चाहीं अहिले पानी तान्ने मेसिन र धारामा पानी आउने तालिका कण्ठै हुने अवस्था बनेको छ। त्यसै भएर त पम्प बेच्नेहरूले विज्ञापननै बनाए ‘सर्भो भए अरू किन खोज्ने’ त्यसो त पानी जोगाऔं भनेर विज्ञापन बजाउन थालेको पनि दशकौं भइसकेको छ।
पानी हाम्रो जिवनको अभिन्न अंग र दैनिक अत्यावश्यक पदार्थ मात्र होईन पानी नै बेचेर करोडपति हुने पनि काठमाण्डौंमै दर्जनौं भईसके तर पनि हाम्रो पानीको प्यास सजिलै मेटिनेवाला छैन। त्यसो त काठमाण्डौंले मेलम्चीको पानीले प्यास मेट्ने रहर गरेको पनि तीन दशक नै हुन लागिसक्यो। ‘मेलम्ची पानीले…….नानीको…..बानीले…’, ‘यो पानी कस्तो बैमानी….’, ‘टिपटिप वर्षा पानी….’ जस्ता दर्जनौं गीत बनिसके अनि चलचित्रका निर्देशकले नायिकाका अंगको दर्शन गराउन नायिकालाई पानीमा नाच्न लगाउने ग्ल्यामर शैलीले पनि धेरै ‘पानी नमाग्ने’ खालका चलचित्रलाई नाफामा लगे तर आज सम्म पनि पानीका ’bout धेरै कुरा हामीलाई थाहा छैन।
यो आलेखमा पानीका ’boutमा पच्चीस तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ, जुन हामीले जान्नु जरूरी छ :
1. भन्नलाई चाहिं पानीको रंग हुँदैन भनिन्छ तर वास्तवमा पानीको रंग हल्का नीलो हुन्छ।
2. संसारमा १% मात्रै पानी पिउन योग्य छ, जसमा ९०% पानी अंटार्कटिकामा जमेर बरफका रूपमा रहेको छ। पिउन योग्य १% पानी मध्ये ०.००३% पानी प्रयोग भईसकेको छ। जति पनि पानी प्रयोग भइसकेको छ त्यसको ७०% पानी कृषिका लागी प्रयोग भएको छ।
3. हरेक वर्ष ३४ लाख मानिसको मृत्यु पानीबाट उत्पन्न हुने रोगका कारण हुन्छन्।
4. अफ्रीकाका मानिसहरू ६ किलोमिटर सम्म पैदल हिँडेर आफ्नो लागी पानीको जोहो गर्छन्।
5. एक पटक ट्वाइलेट फ्लश गर्दा ६ लिटर पानी खर्च हुन्छ।
6. चीनमा ७० करोड मानिस फोहोर पानी पीउन बाध्य छन्।
7. स्विमिंग पुलबाट हरेक महिना ३७ ०० लिटर पानी वाफ बनेर उड्छ।
8. तातो पानी चिसो पानी भन्दा छिटो जमेर बरफ बन्छ।
9. सफा पानीबाट बिजुली प्रसार हुँदैन तर पानी भित्र हुने फोहरले बिजुलीको तरंगलाई प्रसार हुन सहयोग गर्छ।
10. पुरा घरमा खपत हुने पानीको दुई तिहाई पानी बाथरूममा खर्च हुन्छ।
11. ज्यादा पानी पीउनु नशा हुनसक्छ, त्यसको कारण पानी पिउने व्यक्तिको मृत्यु पनि हुनसक्छ।
12. विश्वको २०% सफा र नजम्ने खालको पानी एउटै मात्र तालमा छ, त्यो हो रूसको बैकाल ताल।
13. पानीको बोतलमा लेखिएको प्रयोग गरिसक्नुपर्ने मिती (expiry date
) बोतलको लागी हो पानीको लागी होइन।
14. जिराफ ऊँट भन्दा धेरै समय सम्म पानी नपिइकन बस्न सक्छ।
15. पानी भित्र लामो समय सम्म स्वास रोकेर बस्ने रेकर्ड २४ मिनेटको छ।
16. सन् २०१३ मा दुई भौतिकशास्रीले पानी भित्र टाई बाँधेका थिए।
17. १० बुँद पानी भित्र H20 को मोलिक्युल (molecules) जति छ ब्रह्माण्डमा त्यती नै संख्यामा तारा छन्।
18. हात्तीले ५ किलोमिटर टाढैबाट पानीको पत्तो पाउँछ।
19. सन् १९७० मा अमेरिकाले जति पानी प्रयोग गरेको थियो आजकल त्यो भन्दा थोरै पानी प्रयोग गर्छ।
20. जुन पातलो पाइपमा पानी गुरुत्वाकर्षण को विपरीत दिशामा चढ्छ त्यो पाइपलाई क्यापिलरी ट्युब (Capillary tube) भनिन्छ।
21. एक गीलास सुन्तलाको जुस बनाउनको लागी जतीवटा सुन्तला प्रयोग हुन्छ त्यतीवटा सुन्तला फलाउनको लागी ५० गिलास पानी आवश्यक हुन्छ।
22. मानिसको शरीरमा १% पानीको कमी भयो भने प्यास लाग्छ भने १०% पानीको कमी भएको खण्डमा मानिसको मृत्यु हुन्छ।
23. अमेरिकामा हरेक दिन ४०० बिलियन ग्यालन पानी प्रयोग हुन्छ।
24. यदि एउटा धाराको टुटीबाट १ सेकेण्डमा थोपा पानी चुहिन्छ भने एक वर्षमा ११ हजार लिटर पानी खेर जान्छ।
25. अन्त्यमा, थाहा पाउनुस् कुन चिज बनाउन कति पानीको आवस्यकता पर्दछ:
एउटा एफोर (फोटोकपी वा प्रिन्ट गर्ने कागजको पाना) बनाउन १० लिटर पानी लाग्छ
२५० एमएलको बीयर बनाउन ६४ लिटर पानी लाग्छ
एउटा प्लास्टिकको बोटल बनाउनको लागी ९५ लिटर पानी लाग्छ
एउटा स्याउ उत्पादनका लागी १२५ लिटर पानी लाग्छ भने एउटा केरा उत्पादनका लागी १६० लिटर पानी आवश्यक हुन्छ।
१ किलो ऊन तयार हुनको लागी ८४४ लिटर पानी चाहिन्छ भने १ किलो ब्रेडका लागी १६०८ लिटर।
हामीले लगाउने एउटा जिन्स बनाउनको लागी ८,००० लिटर पानी खर्च हुन्छ।
पानी हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने पदार्थ भएपनि पानीका यस्ता विविध पक्ष ’bout हामीलाई धेरै जानकारी छैन। आज हामी सजिलै पानी प्रयोग गर्न पाईरहेका छौं तर पानीको स्रोत संरक्षण र पानीको समुचित प्रयोग गरेनौं भने कुनै दिन यस्तो पनि आउन सक्छ कि पानी किन्नको लागी नै कमाईको धेरै हिस्सा खर्च गर्न परोस्।